गोकूल बास्कोटालाई आफ्नै क्षेत्रका सांसदहरुले दिए हालसम्मकै ठूलो झड्का, अब के गर्लान ?
काठमाडौं । एमाले सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको निर्वाचन क्षेत्रका दुवै प्रदेश सांसद नेकपा(एकीकृत समाजवादी)मा लागेका छन्। बाँस्कोटाको निर्वाचन क्षेत्र काभ्रे २ को प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र-१ का लक्ष्मण लम्साल र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र-२ का बसुन्धरा हुमागाईं दुवैले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्।
२०७४ को निर्वाचनमा लम्सालले २७ हजार ६ सय २१ मत ल्याएका थिए भने हुमागाईंले २८ हजार ६ सय ७७ मत ल्याएकी थिइन्। एमाले विभाजनपछि बागमती प्रदेशका १२ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन्।
भीम रावलको गृह जिल्लाका सांसदले नै रोजे समाजवादी – पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका नेता भीम रावलले पार्टी टुक्राउन असहमत भएर एमालेमै रहने निर्णय गरेपछि उनी निकटका जिल्ला तहका नेता तथा सांसदहरू समाजवादीमा खुलेका हुन्।
निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमाअगावै नेताहरू जिल्लामा खुल्ने क्रम जारी छ। रावललाई सुरूदेखिनै साथ दिँदै आएका जिल्लादेखि प्रदेश तहका अधिकांश नेता माधव नेपाल पक्षमा उभिएपछि जिल्लामै रावल कमजोर देखिएका छन्।
२ निर्वाचन क्षेत्र रहेको अछाममा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद शेरबहादुर कुँवरले समाजवादी रोजेका छन्। क्षेत्र नम्बर २ बाट रावलले जितेका हुन्। एमाले जिल्ला अध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्य रहिसकेका कुँवरले माधव नेपाललाई पहिलेदेखि नै साथ दिएका थिए। रावलनिकट मानिएका उनको क्षेत्रका कुँवर पार्टी टुक्रिएसँगै माधव नेपालतिर लागेका हुन् ।
प्रदेश सदस्य शंकर भण्डारी पनि समाजवादीमा लागेका छन् । अछाम क्षेत्र नं. २ का प्रभावशाली नेता भण्डारीले रावललाई छोड्दै माधव नेपाललाई साथ दिएका छन्। प्रदेश सभा तर्फ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ क मा जितेका हर्कबहादुर कुँवर एमालेमै छन्। ख मा माओवादीबाट जितेका झपट बोहोरा एमाले प्रवेश गरेपछि उनको पद रिक्त छ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ क बाट निर्वाचित बलबहादुर सोडारीले समाजवादी रोज्दा ख बाट जितेका अक्कल रावल एमालेमै छन्। अछामबाट समानुपातिक सांसद दुर्गाकुमारी कामी र मना साउदले पनि समाजवादीमा सनाखत गरेका छन्। यसअघि गृह जिल्लाका नेता रावललाई साथ दिँदै आएकी कामीले नेता रावल नेकपा एमालेमै रहेपछि उनको साथ छाडेकी हुन्।
‘सुरूमा आफ्नै पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र उनको सरकारलाई प्रतिगमन भनेर रावलले विरोध गर्न लगाए। मान्यौं, समानान्तर कमिटी बनाउने भने मान्यौं र कनम रावलले नेतृत्वमा समामान्तर कमिटी बनायौं। जनस्तरमा पनि ओलीविरूद्ध उत्रन रावलले नै आव्हान गरे। आज आएर आफू सुटुक्क ओलीतिरै गएपछि हामीले उहाँको साथ छोडेका हौं’, कामीले भनिन्।
नेकपा एमाले अछाम जिल्ला तहका अधिकांश नेता समाजवादी पक्षमा छन् । एमाले अछामका अधिकांश जिल्ला कमिटी सदस्य तथा जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरू पनि समाजवादीमै छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका १० जना नेकपा (एमाले) सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का पक्षमा सनाखत गरेका छन्।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पक्षमा सनाखत गर्नेमा पूर्णा जोशी, लालबहादुर खड्का, बलबहादुर सोडारी, अम्मर साउँद, चुनकुमारी चौधरी, मना साउँद, कुलवीर चौधरी, सुशीला बुढाथोकी, दुर्गा कामी र माया भट्ट छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारीले आफूसहित तीन जना सांसदले बुधबार आयोगमा गएर सनाखत गर्ने बताए। उनीसहित अर्चना गहतराज र तारा लामा तामाङले सनाखत गर्न बाँकी छ। ५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिमको प्रदेश सभा एमालेका २५ सांसद थिए। तीमध्ये यसअघि १८ सांसद नेपाल पक्षमा भएको बताइएको थियो।
सुदूरपश्चिमको एमालेमा उपाध्यक्ष भीम रावलको बलियो प्रभाव थियो। २०७४ को निर्वाचनमा उनले आफूनिकट धेरैलाई टिकट दिएका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नेता माधव नेपालको टकराव हुँदा रावल नेपालसँगै थिए। तर पछिल्लो समय उनी नेपालको साथ छोडेर एमालेमै बसेका छन्।